World Tourism Organisation (UNWTO) ine mukana mutsva weAfrican Saudi neSaudi Arabia inotungamira nenzvimbo yeMorocco
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hurumende Nhau » World Tourism Organisation (UNWTO) ine mukana mutsva weAfrican Saudi neSaudi Arabia inotungamira nenzvimbo yeMorocco
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Investments • misangano • Marokero Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Wtn
Moroko izita rinoputika remadzinza uye tsika. Inoita iro rakakodzera guta kugadzirisa iyo yepasirese yekufambisa uye yekushanya indasitiri iyo yakamanikidzwa kupfugama.
Morokiyo inogona kunge iri nyika inokwanisa kugadzirisa zvisakanaka musarudzo mbiri dzakapfuura dzeUNWTO Secretary-General uye nekumisikidza ramangwana reiyi sangano rakabatana neUN kudzoka munzira nerutsigiro rwemari runodikanwa.
Marokero inogona kunge iri nzvimbo iyo kushanya zvakare zvakare kuve mutungamiri mune hupfumi hwenyika uye mhuri yepasirese.
Chakavanzika kwazvo, asi chakanyanya kukosha nguva dzose, General Asseting yeiyo World Tourism Sangano (UNWTO) rakatamiswa chinyararire kubva muna Gumiguru 2021 kuti riitwe ikozvino kubva munaNovember 30 kusvika Zvita 2, 2021, muMarrakesh, Morocco.
Kusarudzwa patsva kwaZurab Pololikashvili saUNWTO Secretary-General kwenguva inotevera kubva 2022-2025 ichavhoterwa. Iko kune mukana wekugadzirisa yakakosha zvisizvo.
Kufambisa dzimbahwe reUNWTO kubva kuMadrid, Spain, kuenda kuRiyad, Saudi Arabia, iri kutarisirwa kuwedzerwa kuchirongwa uye kusarudzwa.
Pasina kuburitsa chero kuburitswa kana chiziviso, nhengo dzeWorld Tourism Organisation dzakaziviswa nhasi nezve shanduko inotarisirwa yezuva reNational Assembly yechi24 iri kuuya.
Iyo GA ichaitwa sekutanga zvakarongwa muMoroccon Guta reMarrakesh kubva munaNovember 30 kusvika Zvita 2, 2021. Shanduko yemusi yakanga yatarisirwa uye chaive chakavanzika chakavhurwa, changobuditswa pachena.
Moroko inzvimbo huru yeku Africa yekushanya uye yekushanya nzvimbo, uye akabatwa neCOVID-19, senge zhinji dzenyika.
UNWTO yakashoropodzwa kuti haina basa uye haina kurarama zvinoenderana nematambudziko nyika yekushanya yanga ichisangana nayo kubvira COVID-19 payakabuda munaKurume wa2020.
Moroko haizove nzvimbo chete yeimwe General Assembly. Izvo hazvizongoitirwa kuitirwa munyika yakazvipira kune yekufambisa neyekushambadzira indasitiri, asi zvakare munyika iri kuitisa chiitiko chakakosha ichi kupokana nezvose zvinokanganisa apo COVID-19 iri panotarisirwa nhongonya.
Chichava chiitiko apo nhengo dzenyika dzinogona kugadzirisa zvisizvo zvakatanga muna 2018. Ichowo chiitiko uko iyo UNWTO imba yaigona kufambiswa kwekutanga kubvira kuiswa kweUNWTO yakasarudzika agency.
Zvichienderana nezvose izvi, UNWTO inogona kekutanga kuve sangano rine mari yakakwana, rutsigiro, uye kudzoserwa semutungamiri wepasirese uye mutambi wechikwata chevoruzhinji chikamu chekushanya.
Kuti uwane huchokwadi, nyaya yekuvhota manenji muna 2017 uye zvakare muna 2021 inogona kugadziriswa usati wasimbisa secretary-general kusvika 2022-2025 term.
Moroko ndiyo ichave yega nzvimbo iyo Secretary-General aripo haagone kupomerwa uye mutongi panguva imwe chete.
Saudi Arabia yanga ichirarama kusvika pakuva wekutanga kupindura uye zvimwe zvakawanda kune yepasirese yekufambisa uye indasitiri yekushanya. Nemabhirioni akagadzirira kuisa mari, ichi ndicho chirevo chinokwezva chiripo chesangano rine bhajeti yemamirioni masere chete, yakawanda yacho yakashandiswa pakufamba kwaSecretary-General neshamwari dzake. Saudi Arabia mukudzoka inonzwa dzimbahwe idzva muRiadh ichachengetedza kugadzikana kwezvemari kweiyi UN-yakabatana agency. Naizvozvo, zano rekubvisa dzimbahwe rayo kubva kuMadrid richienda kuRiadh rinotarisirwa kuwedzerwa kuchirongwa.
Parizvino, iyi ajenda haitaure izvi zvese izvozvi. Izvozvi zvave kunhengo dzeUNWTO kupedzisa ajenda nenzira yakakodzera. Zviri zvakare kunhengo kuti dzigadzirire kufamba kuMarrakesh, saka vhoti yakafara pazvinhu zvekushanya zvepasirese zvinogona kufambiswa uye kuvimbiswa.
Zvinogona kungotarisirwa vatungamiriri, zvakare mumunda wehutano hwepasirese, indasitiri yakazvimiririra, misoro yemasangano, uye nhepfenyuro dzakasiyana siyana, vachakokwa kuenda kuGeneral Assembly. Global Tourism inoda hutungamiriri, uye Moroko ine mukana, uyo ungave uri wekupedzisira mukana, wekuchengetedza World Tourism Organisation
Izvo zviripo ajenda neUNWTO secretaryariat:.
Muvhuro, Mbudzi 29, 2021
Chipiri, Mbudzi 30, 2021
10:00 - 11:00 Komiti neBudget Committee
10:00 - 11:00 Komiti yeKuongorora kweZvikumbiro zveMitezo Yakabatana
11:30 - 13:00 Chikamu che114 cheKanzuru Inotungamira
12:00 - 14:00 43rd UNWTO Nhengo Dzakabatana Plenary Session
14:00 - 15:00 Masikati
15:00 - 16:30 Komiti Yezvekushanya nekusimudzira
15:00 - 16:30 Komiti Yezvekushanya uye Kukwikwidza
15:00 - 17:00 Boka rinoshanda paInternational Code yeKudzivirirwa kweVashanyi
15:00 - 18:00 43rd UNWTO Nhengo Dzakabatana Plenary Session
16:30 - 18:00 Komiti ye Statistics
16:30 - 18:00 Komiti Yezve Tourism Online Dzidzo
19:00 - 22:00 Tinogamuchira kudya kwemanheru
Chitatu, December 1, 2021
10:00 - 10:30 Kuvhura zviri pamutemo
10:45 - 13:15 Chikamu chegumi 1
13:15 - 13:30 Mufananidzo weboka
13:30 - 15:30 Masikati
15:00 - 15:30 Dare Rezvikwereti
15:30 - 18:30 Chikamu chegumi 2
20:30 - 22:30 Kudya kwemanheru
China, December 2, 2021
10:00 - 13:00 Chikamu chemusoro wenyaya: Kugadziridza, Dzidzo nekusimudzira Kwekumaruwa Kuvaka Kudzoka Zviri Nani
13:00 - 14:30 Masikati
14:30 - 17:30 Chikamu chegumi 3
14:30 - 16:30 Nhengo Dzepasi Bhodhi
17:30 - 18:30 Sangana Nhengo musangano
20:00 - 22:00 Kudya kwemanheru
Chishanu, December 3, 2021
10:30 - 12:00 Chikamu che115 cheKanzuru Inotungamira
12:00 - 12:30 Komiti neBudget Committee
Unyanzvi hwekushanya (TBC)
Click pano kuti uwane rumwe ruzivo nezve 24th UNWTO General Assembly.